သင်ဟာ Online Shopping Plus အားအဆိုပါ Swagbucks Browser ကိုတိုးချဲ့နှင့်အတူတစ်ဦးကိုအခမဲ့ $ 10 Get တဲ့အခါမှာ Save ကိုငွေ - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ » ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ငွေကိုသင်အွန်လိုင်းစျေးဝယ် Plus အားအဆိုပါ Swagbucks Browser ကိုတိုးချဲ့နှင့်အတူတစ်ဦးကိုအခမဲ့ $ 10 Get လိုက်တဲ့အခါ
သင်တစ်ဦးက desktop ကွန်ပျူတာနှင့်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကာကြောက်မက်ဘွယ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရှိသည်! ဒါဟာသင်က Google Chrome ကိုသို့မဟုတ် Internet Explorer ကိုများအတွက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်သော Swagbucks browser ကို extension ကိုပါပဲ။
အဆိုပါ Swagbucks browser ကို extenstion နဲ့, သင်, သင်ရွေးချယ်ထားသောစတိုးဆိုင်များမှာကျောငွေလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Amazon, eBay, Walmart, ပစ်မှတ်အဖြစ်သင်အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးမှာကြံ့ခိုင်ရေးထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားဝယ်ယူမှုအပေါ်ပိုက်ဆံချွေသီးသန့်ကူပွန်, သင်ပင်ရရှိနိုငျ သူတို့ထံမှအခမဲ့ $ 10 ဆုကြေးငွေကိုသင် sign up ကိုအခါ။ ဒီ Swagbucks browser ကို extension ကိုအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဒါဖို့သေချာအောင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် 100% အခမဲ့ဖွင့်ကြောင်း ယနေ့ Download ပြုလုပ် ပိုက်ဆံကယ်တင်ပြန်ငွေဝင်ငွေ!
Swagbucks Browser ကိုတိုးချဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ:
သငျသညျ Swagbucks တက်သည်လက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့သင်ကအဖွဲ့ဝင်သင့်အကောင့်ရဲ့ Swag ups အပိုင်းအတွက်အပိုဆု "Activate" ရမည်ဖြစ်သည်။ အပိုဆုတန်ဖိုးကို SB ဟုခေါ်တွင်ရမှတ်၏ပုံစံအတွက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျ Swagbucks.com/Shop အတွက် featured တစ်စတိုးဆိုင်အနည်းဆုံး $ 1000 ဖြုန်းအခါ, တန်ဖိုး $ 10 ညီမျှသော 25 SB ဆုကြေးငွေ, ရယူပါ။ သင်မှတ်ပုံတင် 25 ရက်အတွင်းဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်သောဤဝယ်ယူမှုများအတွက် 30 SB ၏နိမ့်ဆုံးကိုရရှိရမညျဖွစျသညျ။ MyGiftCardsPlus.com နှင့်ခရီးသွားဝယ်ယူမှုအရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူး။
ငွေ Back ကိုရယူနိုင်သောမှနောက်ထပ်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေပါသလား
Swagbucks အပြင်, ငါတို့သည်လည်း ပို. ပင်စတိုးဆိုင်များမှာကျောအခမဲ့ငွေဝင်ငွေအဖြစ်ကောင်းစွာ eBates တက်သည်လက်မှတ်ထိုးအကြံပြုပါသည်။ သင်ဒီမှာအခမဲ့ eBates အဘို့အ sign up ကိုလို့ရပါတယ် eBates သင်တို့ကိုလည်းအဖြစ်ကောင်းစွာတက်လက်မှတ်ထိုးများအတွက်အခမဲ့ $ 10 ပေးလိမျ့မညျ!
စက်တင်ဘာလ 14, 2018 admin အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ မှတ်ချက်မရှိ